Hitokona Tsy Hisakafo Ireo Mpitantana ny Fantsona Telegram Nogadraina Ao Iràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 12:22 GMT
Nima Keshvari, mpitantana ny fantsona Telegram voasambotry ny Vondrona Mpitsikilon'ny IRGC tamin'ny tapaky ny volana Martsa 2017.
Tao amin'ny tranonkalan'ny Foibe Mpiaro ny Zon'Olombelona any Iràna no namoahana ity lahatsoratra ity voalohany.
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tao amin'ny fonjan'i Evin any Iràna ireo enina mpitantana ny fantsona fampitàn-kafatra Telegram ho fandàvana ny famonjàna azy ireo maharitra nefa tsy afaka mahazo tohana ara-pitsaràna. Voasambotra ny omalin'ny fifidianana filoham-pirenena Iraniana tamin'ny May 2017 ireo enin-dahy ireo.
Loharanom-baovao iray no nilaza tamin'ny Foibe Mpiaro ny Zon'olombelona any Iràna (CHRI) fa tsy mbola misy fiampangàna natao ireo gadra ireo — izay nanohana ny filatsahan'ny Filoha Rouhani indray ho fidiana — telo volana mahery aty aorian'ny nisamboran'ny Vondrona Mpiaro ny Revolisiona Islamika (IRGC) azy ireo, tamin'ny volana Martsa 2017.
“Nisy ireo mpisolovava niseho mba hiaro azy ireo, saingy noho ny baikon'ny IRGC dia tsy navelan'ny Lehiben'ny mpampanoa lalàna sy ny mpitsara hijery ireo gadra ireo mpisolovava ireo ” hoy ny loharanom-baovao tamin'ny CHRI.
“Lasa ôfisialy ny fisoloana tena araka ny lalàna taorian'ny nanaovan'ny mpanjifa iray sonia ny taratasy manome alàlana ny mpisolovavany ho azy ireo,” hoy ihany ilay loharanom-baovao. ” Fa mbola tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao.”
Ny 19 Jona 2017, nanomboka nitokona tsy nisakafo tao amin'ny fonjan'i Evin, faritra 2-A, any Iràna, izay fehezin'ny IRGC ry Ali Ahmadnia, Mojtaba Bagheri, Sobhan Jafari-Tash, Javad Jamshidi, Nima Keshvari ary Saeed Naghdi .
Ny mpitsara Abolqasem Salavati no nitarika ny fitsarana ny raharahan-dry zareo tao amin'ny lapan'ny fitsarana Revolisionera any Teheran.
Nolazain'ny Mpisolovava, Ali Mojtahedzadeh, tamin'ny Mpiasan'ny Masoivohom-baovao Iraniàna (ILNA) tamin'ny 21 Jona fa hanampy an'i Keshvari sy Bagheri izy noho ny fangatahan'ny fianakavian-dry zareo, nefa nolavina ny fangatahany hihaona amin-dry zareo tany am-ponja.
“Mikasika ireo hetsika fanohanana ny governemanta [Rouhani] no fiampangana voalaza amin'ny raharahan-dry zareo,” hoy ihany i Mojtahedzadeh. ” Tsy azonao ampangaina ny olona hoe manohitra ny filaminam-pirenena rehefa miara-miasa amin'ny governemanta.”
Voatsikeran'ny IRGC am-pahibemaso ny fitantanan'ny Filoha Hassan Rouhani miandany amin'ny hery afovoany izay manana fifandraisana akaiky amin'ny antoko mpanohana ny fanavaozana, noho ny nandàvany tsy hanivana ireo zavatra sasany navoakan'ny Telegram.
Notoherin'i Rouhani ihany koa ny teritery avy amin'ireo mpifikitra fatratra amin'ny netnindrazana mba hanakanana ny Telegram talohan'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny Martsa 2016 sy ny fifidianana Filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna tamin'ny May 2017.
Vahoaka 40 tapitrisa no mampiasa ilay fampiasa, amin'ny findainy ny ankamaroany, any Iràna hoy ny Telegram.
Teo anelanelan'ny 14-16 Martsa 2017, novorian'ireo mpiasan'ny Fikambanan'ny mpitsikilon'ny IRGC ireo valo amin'ny 12 mpitantana ny fantsona Telegram miara-dia amin'ny antoko mpanohana ny fanavaozana izay nanohana ny filatsahan'i Rouhani ho fidiana fanindroany.
Vetivety dia navotsotra ny roa, fa notànana ny enina ambiny ary noterena hamindra ny fifehezany ny fantsona Telegram-ny amin'ny IRGC, izay namono ny votoatiny rehetra.
Efa ho tapa-bolana aty aorian'ny fisamborana azy ireo, tamin'ny 26 Martsa, dia niteny tamin'ny Ministeran'ny atitany i Rouhani mba hanao fanadihadiana momba ” ny fisamborana mampiahiahy an'ireo mpikatroka mafana fo maron'ny haino aman-jery ny omalin'ny fifidianana” ho tohin'ny antso nataon'ny mpikambana mpanohana ny fanavaozana ao amin'ny Parlemanta mba ho fangataham-panazavàna momba ilay fisamborana.
Hatramin'izao, tsy mbola namoaka am-pahibemaso ny zavatra hitany ny ministera ary ny manampahefana momba ny lalàna tsy nilaza afa-tsy ny hoe voasambotra ireo lehilahy ireo satria voalaza fa misy ifandraisany amin'ny “resaka filaminana” sy ” fihetsika tsy mendrika”.
“Ny momba ity tranga manokana ity, dia misy raharaha mahakasika ny minisitry ny sampam-pitsikilovana (Mahmoud Alavi ) izy tenany ka noho izany tsy afaka milaza na manao tatitra momba ity raharaha ity izy “, hoy ny mpitondra tenin'ny fitsarana, Gholamhossein Mohseni Ejei, tamin'ny 12 Aprily.
“Tsy mahafantatra aho na dia iray aza heloka bevava nataon'ireo mpitantana ka ifampizaràko andraikitra,” hoy ny navalin'i Alavi, ora vitsy taty aoriana. ” Toa hoe noho ny amiko no nisamborana azy ireo.”
Lalàm-panorenan'ny Repoblika Islamikan'i Iràna, Andininy 90:
“Na iza na iza manana fitarainana mikasika ny asan'ny antenimiera [ Parlemanta] na ny fahefana mpanatanteraka, na ny fahefana mpanao lalàna dia afaka mandefa ny fitarainany an-tsoratra any amin'ny antenimiera. Tsy maintsy manao fanadihadiana io fitarainany io ny antenimiera ary manome valiny mahafapo. Amin'ny tranga izay fitarainana mahakasika ny fahefana mpanatanteraka na ny mpanao lalàna, dia tsy maintsy mitaky ny fanadihadiana izany raharaha izany sy ny fanazavana marim-pototra avy amin-dry zareo ny antenimiera, ka lazaina amin'ny fotoana mahamety azy ny vokatra. Amin'ny tranga izay ny tombotsoam-bahoaka no fototr'ilay fitarainana, dia tsy maintsy atao imasom-bahoaka ny valiny.”
Rouhani no nanendry an'i Alavi.ho lehiben'ny Ministeran'ny sampam-pitsikilovana.
Nahazo sary avy tamin'ny Instagram mampiseho ny Minisitra mipetraka miaraka amin'ireo mpiandraikitra nofonjaina ny CHRI . Nanomboka tamn'izay dia nakatona ilay kaonty.
Sorena amin'ny tsy fitohizan'ilay raharaha momba ny tranga mikasika ireo malalany ny sasany amin'ny fianakavian'ireo voafonja ka tamin'ny 6 Jona dia nametraka fitarainana niaraka tamin'ny Komitin'ny andininy faha 90 ao amin'ny Parlemanta izay miandraikitra ny fanadihadiana momba ny fitarainam-bahoaka.
Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny CHRI, tsy navoakan'ny komity ny vokatry ny fanadihadiany.
Solombavambahoaka telopolo no nanoratra taratasy tany amin'i Alavi tamin'ny 30 May nangataka azy mba hanazava ny anton'ny fanitsakitsahana ny Lalàm-panorenana amin'ny fitànana maharitra tsy afaka mahazo tohana araka ny lalàna.
“Mbola tsy mazava ny lalàna itànana ireo mpitantana ny fantsona Telegram maro mpomba ny governemanta [Rouhani] izay nosamborina tamin'ny ankatoky ny fifidianana ho filoham-pirenena, roa volana aty aorian'ny fisamborana azy ireo,” hoy ilay taratasy.
“Araka ny fanazavàna voarainay, tsy voatsara tao anatin'ny fe-potoana ara-dalàna ireo olona ireo araka ny Andininy 32 ao amin'ny Lalàm-panorenana, sady voahitsakitsaka tamin'ny fandàvana mpisolovava ho azy ireo ny andininy 35.”
Tamin'ny 6 Jona, novalian'i Alavi nandritra ny fotoam-pivorian'ny solombavambahoaka tsy azo natrehina ireo fanontaniana ireo, fa tsy nolazaina ny olona ireo fandinihina sy adihevitra ireo.